Ka wareejinta UNWTO ee Madrid iyo Riyadh waxay xiraysaa Dalxiiska Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Ka wareejinta UNWTO ee Madrid iyo Riyadh waxay xiraysaa Dalxiiska Mareykanka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Waxaa jiri doona berri cusub dalxiiska. Berrito cusub, ama qaar baa leh caadi caadi ah ayaa laga yaabaa inuu mar horeba bilaabmay. Waxay umuuqataa Sacuudi Carabiya inay u muuqatay feker iyo hogaamiye cad.
Sacuudi Carabiya ayaa u soo ifbaxday sidii shirkad cusub oo loogu talagalay safarka iyo dalxiiska warshadaha caalamiga ah oo isku dayaya magacyo caan ah iyo qeybaha hoggaanka dalxiiska.
U guuritaanka Xarunta Dhexe ee UNWTO Madrid iyo Riyadh waxay noqon doontaa tallaabada ugu geesinimada badan ee abid la sameeyo, Sacuudi Carabiyana waxay umuuqataa inay goaan qaadatay.
Sacuudi Carabiya waxaa laga yaabaa inay fursad u hesho inay u horseedo dalxiis wajiga xiga ee ka dambeeya COVID, Isla mar ahaantaana Boqortooyada ayaa sidoo kale fursad u leh inay ku saxdo khaladaadka qaar ee geeddi-socodka doorashada UNWTO.
Dunida safarka iyo dalxiiska waxay ubaahantahay xoogaa caawinaad ah si aad dib uguhesho wadada saxda ah. Qaab dhismeedka caalamiga ah Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) waxay mataleysaa xubnaha ugu wax soo saarka badan uguna saameynta badan shirkadaha safarka iyo dalxiiska gaarka loo leeyahay. Waa lagama maarmaan in WTTC ay la xiriiri karto lana xiriiri karto waaxda dadweynaha. Qeybaha bulshada waxaa matalaya hay'ada qaramada midoobey ku xiran Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO).
Tan iyo markii Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvilhis uu qabtay kursiga UNWTO, Ururka Dalxiiska Adduunka wuxuu noqday hay'ad sir badan leh, oo ay ka mid tahay ka go'ida WTTC.
Sacuudi Carabiya ayaa heshay. Boqortooyadu waxay leedahay lacag iyo saameyn si ay isugu keento wax cusub oo caadi ah una qaabeyso mustaqbalka dalxiiska adduunka.
Shiinaha ayaa tan isku dayay kadib shirkii guud ee UNWTO ee ka dhacay Chengdu, markii Zurab loogu codeeyay awooda. Shiinaha ayaa sameeyay Isbahaysiga Dalxiiska Adduunka. Ururkani si kastaba ha ahaatee weligiis kama qaadin.
Dunida dalxiiska adduunka ayaa ku jirta dhibaato. Ganacsi kasta, waddan kasta wuxuu u halgamayaa badbaadintiisa xilliyada aafada. In kasta oo qaar badan ay jaraan kharashaadka badankood, Sacuudi Carabiya waxay ku bixisaa lacag dalxiis sida waddan aan waligiis awoodin inuu sameeyo: Balaayiin iyo balaayiin Dollar.
Wasiirka Dalxiiska Axmed Al-Khateeb ayaa la arkey isagoo aduunka u socdaalaya isagoo qaab socdaal ah markastana la socda wafdi balaaran oo lataliyeyaal ah.
Waxay u badan tahay inuu isku xirey waxyaabo aad uga badan, oo aad uga ballaadhan Xoghayaha Guud ee UNWTO. Wafdiga sacuudiga marwalba waa xidigta xaflad kasto.
Bishii Abriil ee sanadkan, WTTC waxay awood u yeelatay inay ka baxdo shirkii ugu horreeyay ee caalamiga ah ka dib COVID-19 waxayna mideysay adduunka dalxiiska ee Cancun, Mexico.
Caawinaad yar oo ka timid Sacuudi Carabiya oo uu wakiil ka yahay HEAxmed Al Khateeb, wasiirka dalxiiska Boqortooyada, wufuudda ka qaybgalaysa qaarkood Shirka WTTC Global ayaa gurigiisa la aaday rajo yar ka dib markii uu la kulmay wasiirka Sacuudiga. Waxaa loogu yeeray xiddigga ifaya ee dalxiiska adduunka.
Laba toddobaad ka dib shirweynahan guusha leh ee WTTC, agaasimaha guud ee WTTC iyo martigeliyaha shirwaynaha, wasiirkii hore ee dalxiiska ee Mexico, Gloria Guevara, ayaa ku dhawaaqday, waxay u guuri doontaa Sacuudi Carabiya bisha Luulyo si ay lataliye ugu noqoto wasiirka dalxiiska Sacuudiga.
Si kale haddii loo dhigo wasiirka Sucuudiga jUst ayaa shaqaaleysay haweeneyda ugu saameynta badan dalxiiska lataliye ahaan. Gloria hadda waxay ku sugan tahay Riyadh iyadoo u shaqeyneysa Dowladda Sacuudiga.
Wasiirka sacuudiga ee waqtigaas wuxuu yiri: “Waxaan leenahay hidaha qaran ee adag iyo kumanaan sheekooyin gaar ah oo naloo sheego. Gloria waxay keentaa khibrad caalami ah iyo shabakad caalami ah oo aad u fiican waqtigeeda iyada oo mataleysa dalxiiska caalamiga ah iyo waaxda safarka iyada oo ah agaasimaha guud ee WTTC iyo khibrad toos ah oo ku saabsan horumarinta warshadaha dalxiiska ee bilawga ah xilligii ay ahayd Xoghayaha Dalxiiska ee Mexico, taas ayaa naga caawin doonta sida ugu weyn. - Maalgashiga miisaanka ee dalxiiska ayaa u gudbaya heerka xiga. ”
Wasiirka waa sax. Gloria kali kuma ahan xaafadeeda cusub. Xarun goboleed loogu talagalay WTTC waxaa hadiyad ahaan u furtay Wasaaradda Dalxiiska Sacuudiga.
Sidoo kale Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) oo laga furay xafiis goboleed magaalada Riyadh, si loo taageero kobaca waaxda dalxiiska ee Bariga Dhexe maadaama ay ka soo kabaneyso faafida cudurka coronavirus.
Xafiisku wuxuu daboolayaa 13 dal oo gobolka ka mid ah wuxuuna u adeegaa barxad lagu dhiso koritaanka muddada-dheer ee waaxda iyo horumarinta raasumaalka aadanaha ee waaxda safarka iyo dalxiiska ee gobolka.
Xafiiska waxaa ka mid ah Xarunta Istaatistikada oo u heellan ujeeddadeeduna tahay inay noqoto hoggaanka sare ee tirakoobka dalxiiska gobolka.
Talaabada ugu dambeysa waxay ku jirtaa sameynta sida lagu kalsoonaan karo eTurboNews ilaha
Waxay ka wareejineysaa Ururka Dalxiiska Adduunka ee Isbaanishka una wareejineysa Sacuudi Carabiya.
Hay'adda qaramada midoobay la shaqeysa waxay joogtay magaalada Madrid ee dalka Spain tan iyo markii la aasaasay 1-dii Nofeembar, 1975. Tani waxay siisay Spain kursi joogto ah iyo awoodda codbixinta ee Golaha Fulinta, hay'adda maamusha ee Ururka Dalxiiska Adduunka.
U guuritaanka UNWTO Sacuudi Carabiya waxay noqon doontaa tallaabo weyn iyo isbeddel muhiim u ah dalxiiska adduunka. Waxay siin laheyd Boqortooyada Sacuudi Carabiya kaliya hoggaanka warshadahaan, laakiin waxay siineysaa boos joogto ah golaha fulinta.
Talaabada noocan oo kale ah waa in lagu ansixiyo Golaha Guud ee loo qorsheeyay bisha Oktoobar ee sanadkan dalka Morocco. Akhriso Golaha Guud ee UNWTO Marooko: Sir wali lama soo bandhigin?
Sida laga soo xigtay eTurboNews Ilo wareedyo, Dowladda Spain waxay ka jawaabtay niyad jab waxayna aad uga soo horjeedaa talaabadaas.
Waxay u muuqataa in tallaabadani laga yaabo in horeyba loo qorsheeyay Sebtember 2017 shirkii Golaha Guud ee UNWTO ee Chengdu, Shiinaha.
Golaha Guud ee UNWTO 2017
Waxaa laga yaabaa inay sharraxdo sababta Sacuudi Carabiya u taageertay Zurab Pololikashvil doorashadiisii ​​su'aalaha ahayd ee ka dhacday Shiinaha, iyo dib u doorashadiisii ​​bishii Janaayo ee sannadkan ee UNWTO SG oo ka soo horjeeday murashaxa Baxrayn, HE Mai Al Khalifa .
Labadii xoghaye guud ee hore ee UNWTO, Dr. Taleb Rifai iyo Francesco Frangialli ayaa labaduba kasoo horjeestay qaabka ay doorashadan u dhacday. Waxay ku qoreen warqad furan wicitaan soo celinta sumcadda geedi socodka doorashada UNWTO . Mashruucan u doodid wuxuu ahaa hindise ay sameeyeen Shabakada Dalxiiska Adduunka, oo ah hay'ad gaar loo leeyahay oo leh hogaamiyaasha dalxiiska 127 dal, ayna saxiixeen madax badan.
Kaaliyihii hore ee UNWTO iyo xoghayihii hore WTTC Prof. Geoffrey Lipman. Louis d'Amore, aasaasihii iyo madaxweynihii Machadka Caalamiga ah ee Nabadda ee Dalxiiska (IIPT), iyo Juergen Steinmetz, gudoomiyaha cusub ee la aasaasay Shabakada Dalxiiska Adduunka saxiixay magacooda si ay u taageeraan warqadda.
Waxqabadka UNWTO ee dalxiiska adduunka dad badan ayaa su'aal ka keenay muuqaalka gadaashiisa.
Sida laga soo xigtay eTurboNews ilo, dalalku waxay u wadeen Sacuudiga si ay u caawiyaan.
Waxaa jira lobbiyada sii kordhaya ee dhismaha taageerada si UNWTO loogu wareejiyo Sacuudi Carabiya. Boqortooyadu waxay martigelin wanaagsan iyo saaxiibtinimo u laheyd warshadaha markay ku dhaqaaqaan caqabado aan macquul aheyn heerar badan.
Si kastaba ha noqotee codadka mucaaradka ayaa leh tani waxay siinaysaa Sacuudi Carabiya xakameyn aad u badan, kuwa kale waxay diidayaan arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sinnaanta Boqortooyada.
Golaha Guud ee UNWTO wuxuu u baahnaan lahaa inuu ansixiyo soo jeedinta Golaha Fulinta ee UNWTO bisha Janaayo si loo xaqiijiyo Zurab Pololikashvilhis markii labaad.
Sacuudi Carabiya waxay fureysaa albaabka isu keenida adduunka dalxiiska. Way kari kartaa khaladaadka qaar saxo, oo u dejiyey dariiqa boostada mustaqbalka warshadaha dalxiiska COVID-19.
eTurboNews waxay la xiriirtay UNWTO SG Lataliyaha Gaarka ah Anita Mendiratta iyo Marcelo Risi, Agaasimaha Isgaarsiinta, Ururka Dalxiiska Adduunka. Wax jawaab ah ma jirin.
Mareykanka ayaa ka digay dhamaan safarada Ruushka
Muxuu Ku-simaha Ra'iisul Wasaaraha Eswatini ...
Kenya waxay bartilmaameedsaneysaa Dalxiiska Afrika si loo yareeyo COVID-19 ...